Isisabalalisi samanzi → Isikole • Inyuvesi • Kindergarten • Warsaw
Ngabe udinga isitsha samanzi esikoleni, enkulisa noma eyunivesithi? Inkampani yaseWater Point iyanikezela abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela, abaphuzayo, Umthombo wabaholi bomhlaba emabhange, thina esingumhambisi okhethekile ePoland.
Muva nje, ikhwalithi amanzi ukutholakala kwamanzi ePoland kuya ngokuya kuba ngcono. Imithetho yasePoland nemithetho ye-EU idinga ukugcinwa kwamazinga amanzi okuphuza aphezulu. Uma kwenzeka noma yikuphi ukungabaza, kungenzeka uku-oda ikhwalithi lamanzi ageleza esuka empompini esiteshini esiseduze sezokuhlanzeka nesifo.
Abantu abaningi bayazi nokuqwashisa ngezempilo, okusho ukuthi sikukhathalela kakhulu lokho esikuphuzayo. Izitshalo zokwelapha amanzi zifakwa ezindlini eziningi, noma izihlungi abahambisa amanzi.
Kusukela ngoSepthemba 1, 2015, zonke izikole zivinjelwe ukuthi zingathengisi ukudla okungenampilo, kufaka neziphuzo ezinoshukela. Kodwa-ke, izikole zinesibopho sokuhlinzeka abafundi ngamanzi okuphuza, okuyisiphuzo esihle kunazo zonke kubantu.
Kungakho kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi izingane nentsha ingena kalula kumanzi asezingeni elifanele: enempilo, ehlanzekile futhi emnandi, hhayi ekhaya kuphela, kodwa nangaphandle kwayo.
Kukholakala ukuthi izingane ezinkulisa, abafundi bezikole kanye nabafundi basenyuvesi kumele bakwazi ukuthola amanzi okuphuza njalo endaweni yokufunda, lapho bechitha khona amahora amaningi phakathi nosuku. Ngokufanelekile, la manzi kufanele abe mahhala futhi atholakale kalula. Izinkampani ezikhiqiza abahambisa amanzi okuphuza ziphuma zilwa nalezi zifiso. Amadivayisi anjalo angafakwa kalula kuzo zonke izikole. Izingane nentsha zingayisebenzisa noma nini lapho kuvela isidingo, okungukuthi, ngezikhathi zamakhefu ekilasini noma ngemuva kwezifundo zemfundo yomzimba. Ukufinyelela okuhlala njalo nokungenamkhawulo kumanzi ahlanzekile, ahlanzekile futhi anambitha azothuthukisa ukuhanjiswa kahle komzimba, futhi futhi kuzokuvumela ukuba ufunde izindlela zokudla ezifanele.
Izitsha zokuphuza amanzi, imithombo kanye nazo zonke izinhlobo zabaphuzayo, ezingabekwa ezikhungweni zemfundo ezindaweni ezifinyeleleka kalula, zenza kube lula ukuhlinzeka abafundi ngamanzi amahle futhi amnandi.
Isitsha sokuhambisa amanzi okuphuza kufanele sibekwe endaweni efinyeleleka kalula: ekilasini, endaweni ephaseji, esisekelweni sezincwadi sesikole noma egumbini lokufundela eliseduze nasendaweni yokuzivocavoca, okuzoqinisekisa ukufinyelela kalula emanzini asezingeni eliphakeme. Amadivayisi enzelwe izikole anezinto zokuvikela ezikhethekile ukuvimbela ukusakazeka kwamanzi yizingane.
Ngokubheka ukuthi umthombo oyinhloko we-ketshezi enganeni kufanele ube ngamanzi asezingeni elifanele, abahambisa amanzi okuphuza bafeze lo mbono.
Isisabalalisi sesimanjemanje siqinisekisa ukuthi amanzi acwebile e-crystal atholakala kalula, ngenkathi kunciphisa izindleko zokuhlinzeka ukufinyelela kwamanzi okuphuza abafundi. Inzuzo eyengeziwe futhi ukunakekela imvelo.
Amanzi avela ku-dispenser etholakala enkulisa, esikoleni noma eyunivesithi anokunambitheka okuhlukile nekhwalithi futhi akuvumela ukuthi uhole indlela yokuphila enempilo futhi ulolonge umkhuba wokuphuza amanzi nokudla unempilo phakathi kwabantu abasha.
Njengoba izingane kufanele ziphuze cishe amalitha amabili amanzi ngosuku, isixazululo esihle salokhu ukufaka izitsha zokuphuza amanzi esikhungweni ngasinye semfundo, ezindaweni eziningana, ukuze amanzi atholakale kalula kubo bonke abafundi.
amanzi amahhala esikoleniamanzi amahhala esikoleniukufinyelela kwamanzi esikoleniisitsha samanzi sezinganeisitsha samanzi esikoleimfundoimithombo ye-spa esikoleniabaphuzayo ezikolenibaphuza amanzi ezikoleamanzi wezingane ezikoleniamanzi eyunivesithiamanzi esikolethepha amanzi esikoleniimithombo yamanzi yezikoleisiphethu samanzi esikole